သွေးလွန်တုပ်ကွေးကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ ပြည်သူတွေ ဘယ်လိုပါဝင်မလဲ..? | Tachileik Online TV News
Home » TVNews , ကျန်းမာရေး , ရှမ်းရှေ့ , လူမှုရေး , သတင်း » သွေးလွန်တုပ်ကွေးကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ ပြည်သူတွေ ဘယ်လိုပါဝင်မလဲ..?
သွေးလွန်တုပ်ကွေးကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ ပြည်သူတွေ ဘယ်လိုပါဝင်မလဲ..?
Written By Tachileik News Agency on Tuesday, 19 June 2018 | 08:46
တာချီလိတ်ခရိုင်အတွင်း ဒီနှစ်မှာလည်း သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားများနိုင်တယ်လို့ မှန်းဆထားတာကြောင့် ပြည်သူတွေပါဝင်မှ အောင်မြင်နိုင်မယ့် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်အကြောင်း သိသင့်၊ သိစရာတို့ကို တာချီလိတ်ခရိုင် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး၊ ခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာရွှေဝင်းက ရှင်းလင်းပြောပြထားတာကို Tachileik News Agency ရဲ့ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍကနေ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ရိုက်ကူး - ဇောင်းညီ ၊ မင်းသိန်းကျော်
တာခြီလိတျခရိုငျအတှငျး ဒီနှဈမှာလညျး သှေးလှနျတုပျကှေးရောဂါဖွဈပှားမြားနိုငျတယျလို့ မှနျးဆထားတာကွောငျ့ ပွညျသူတှပေါဝငျမှ အောငျမွငျနိုငျမယျ့ သှေးလှနျတုပျကှေးရောဂါကာကှယျရေး လုပျငနျးစဉျအကွောငျး သိသငျ့၊ သိစရာတို့ကို တာခြီလိတျခရိုငျ ပွညျသူ့ကနျြးမာရေးဦးစီးဌာနမှူး၊ ခရိုငျပွညျသူ့ဆေးရုံအုပျကွီး ဒေါကျတာရှဝေငျးက ရှငျးလငျးပွောပွထားတာကို Tachileik News Agency ရဲ့ ကနျြးမာရေးကဏ်ဍကနေ တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။
စီစဉျသူ - ခယျြရီထိုကျ
ရိုကျကူး - ဇောငျးညီ၊ မငျးသိနျးကြျော
တာချီလိတ် ပြည်သူ တစ်သောင်းကျော် ဆန္ဒထုတ်ဖော် မှတ်တမ်း
ဒီဇင်ဘာလ(၂၆)ရက် နံနက်ပိုင်းက တာချီလိတ်ပြည်သူ တစ်သောင်းကျော် စုပေါင်းပြီး တာချီလိတ်မြို့ ရှမ်းရိုးမကွင်းမှ မြန်မာ - ထိုင်း ချစ်ကြည်ရေ...